Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe & ndị na-eweta ihe | Ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke China
Hazie Organo Gold Organic Black Tea na Ganoder ...
Ganoderma Cafe na-ere ahịa Ganoderma dị elu ma ọ bụ ...
Nnukwu Organic Cell-wall gbajiri Ganoderma lucidum Spor ...
Kọfị Sigmatic Mushroom anọ na-agwakọta kọfị kọfị Gourmet ojii
Organic Black Tea na Ganoderma lucidum
Akụkụ dum akpọnwụwo Ganoderma Lucidum ero
High Quality Ganoderma Lucidum PE Reishi PE Re...
Chaga ero ntụ ntụ
Chaga, nke a maara dị ka Inonotus obliquus, bụ ero ọgwụ na-eto eto na osisi birch ọcha. Ọ na-etolite na mpaghara ugwu na 40 ° ~ 50 ° N latitude, ya bụ, Siberia, Far East, Northern Europe, Hokkaido, North Korea, Heilongjiang na ugwu China, ugwu Changbai na Jilin, wdg.
Coriolus Versicolor ntụ ntụ
Coriolus versicolor - nke a makwaara dị ka Trametes versicolor na Polyporus versicolor - bụ ero polypore a na-ahụkarị n'ụwa niile.
Coriolus versicolor bụ ero ọgwụ edepụtara ebe niile maka mgbochi na ọgwụgwọ ọrịa kansa na ọrịa na China. E gosipụtala nke ọma na ihe ndị e nwetara site na Coriolus versicolor na-egosiputa ọtụtụ ihe omume dị ndụ, gụnyere mmetụta na-akpali akpali na mkpụrụ ndụ mgbochi dị iche iche yana mgbochi nke uto cancer.
Shiitake ero ntụ ntụ
Shiitake (aha sayensị: Lentinus edodes) ka a na-akpọ Shiitake na Japan. A na-akọ ahịhịa Shiitake na China kemgbe ọtụtụ puku afọ. Egwu Shiitake nwere ihe dị iche iche na-arụ ọrụ n'usoro ndu nke nyocha sayensị kwadoro. Ha na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịhazi ihe mgbochi, ịba ụba ahụike ọkpụkpụ, ibelata cholesterol na ịkwalite ahụike obi.
Maitake ntụ ntụ
"Maitake" pụtara ero ịgba egwu n'asụsụ Japanese, aha Latin ya: Grifola frondosa. A na-ekwu na ero a nwetara aha ya ka ndị mmadụ gbachara egwu na-enwe obi ụtọ ịhụ ya n'ime ọhịa, ihe ndị dị otú ahụ bụ ihe ngwọta ya na-enweghị atụ.
Grifola frondosa nwere ihe dị iche iche na-arụsi ọrụ ike na ndu nke nyocha sayensị kwadoro. Ha na-ekere òkè dị mkpa n'ibelata ọbara mgbali elu, ibelata shuga ọbara, ịkwalite mgbochi, mgbochi mkpali, na mgbochi nrịanrịa.
Cordyceps Sinensis Mycelia ntụ ntụ
Cordyceps militaris (aha sayensị: Cordyceps militaris) na Cordyceps sinensis (aha sayensị: Cordyceps sinensis), nke a makwaara dị ka olu ume, bụ nke a na-ejikarị na nkà mmụta ọgwụ ndị China na-azụ na ngụgụ na akụrụ, na-echebekwa obi.
Olu ntụ ọka ọdụm
Mane ọdụm (Hericium erinaceus) bụ ụdị ero ọgwụ. Ogologo oge eji na ọgwụ ọdịnala ndị China, a na-enweta mane ọdụm n'ụdị mgbakwunye. Nnyocha sayensị na-egosi na anụ ọdụm nwere ọtụtụ ihe na-akwalite ahụ ike, gụnyere antioxidants na beta-glucan.
Egwu mane ọdụm nwere ọtụtụ ihe na-arụ ọrụ n'usoro ndu nke nyocha sayensị kwadoro. Ọ na-arụ ọrụ dị mkpa n'ichekwa afọ, ịrụzi irighiri akwara ụbụrụ, imeziwanye ebe nchekwa na ikike ọgụgụ isi, wdg.
N'ogbe Organic Ganoderma lucidum wepụ
Ganoderma lucidum wepụ bụ ahụ mkpụrụ osisi chara acha nke a na-egbute n'oge. Mgbe ihichachara, ọ na-anabata mmịpụta mmiri ọkụ (ma ọ bụ mmịpụta mmanya), itinye uche agụụ, ihicha ịgba na usoro ndị ọzọ iji nweta Ganoderma lucidum wepụ ntụ ntụ, nke dị elu nke Ganoderma lucidum ntụ ntụ.
Organic Cell-wall gbajiri Ganoderma lucidum Spore ntụ ntụ
Ganoderma spores bụ mkpụrụ ndụ ọmụmụ ntụ ntụ nke a chụpụrụ na okpu nke Ganoderma mgbe ahụ mkpụrụ osisi toro. Nke ọ bụla spore bụ naanị 5-8 microns na dayameta. Ahịhịa ahụ bara ụba na ihe dị iche iche nke bioactive dị ka Ganoderma polysaccharides, triterpenoids ganoderic acid na selenium.
100% Natural Corolus Versicolor wepụ trametes Versicolor Yunzhi Polysaccharides
Coriolus versicolor na Polyporus versicolor - bụ ero polypore a na-ahụkarị n'ụwa niile. Pụtara 'ọtụtụ agba', versicolor na-akọwa ntụkwasị obi nke ero a na-egosipụta agba dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, n'ihi na ọdịdị ya na ọtụtụ agba dị ka nke toki ọhịa, T. versicolor a na-akpọkarị ọdụ ụgbọ mmiri.
Organic Ganoderma maka ngwaahịa nlekọta ahụike
A na-egbutu mkpụrụ osisi GanoHerb organic ganoderma sinense site na ahụ ọhụrụ mkpụrụ osisi ga-amị mkpụrụ osisi ga-amịpụta. Enwere ike iji mpekere ndị a gbuturu nke ọma na-eme tii ganoderma, ofe esi nri na ime mmanya. Ọ bụ nhọrọ zuru oke idobe ahụike kwa ụbọchị, ọgwụgwọ nri na inye onyinye. 1. Nkọwa: 20kgs / igbe 2. Isi Ọrụ: Ọ nwere ike inye aka na-azụ ndị ọrụ ike ma na-ebelata ahụ ike, ụkwara, ụkwara ume ọkụ, palpitation na anorexia. 3. Ojiji & ...
Ọnụ ahịa N'ogbe Ganoderma Lucidum Reishi Mushroom Spore Mmanụ Softgel
Nke a na mmanụ spore na-eji teknụzụ mmịpụta CO2 dị oke egwu na-ewepụta site na spores ndị tozuru oke akpọnwụ akpọnwụ, nke a na-arụpụta site na usoro nke ịtụ, ihicha, nyocha, mgbawa cell-okpomọkụ anụ ahụ dị ala.
Organic Ganoderma lucidum Mpekere
Ụlọ ọrụ anyị bụ Drafter nke Chinese National Standard maka Ganoderma lucidum (ma ọ bụ a na-akpọ Reishi), Ganoderma lucidum (ma ọ bụ a na-akpọ Reishi) isi ihe abụọ bụ Ganoderma Lucidum (reishi) Polysaccharide na Triterpene.
Ebumnuche anyị bụ ịgafe na Omenala Ahụike Millennia
Nye aka na ịdịmma maka mmadụ niile
adreesị:Haixi hi tech Industrial Park Phase 9 Building,Shangjie Town,Minhou County,Fuzhou City,Fujian Province
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ FUJIAN XIANZHILOU NUTRA-INDUSTRY CO., LTD. Ngwaahịa egosipụtara, map saịtị
Mushroom Reishi wepụ ntụ ntụ, Ntụ ọka ero, Mpekere Organic Reishi, Ganoderma Lucidum Mushroom, Tii Lingzhi, Reishi Spore wepụ, Ngwaahịa niile